Heathrow waxay ku cadaadineysaa hoggaamiyeyaasha adduunka inay oggolaadaan shidaalka joogtada ah ee caalamiga ah ee G7
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Heathrow waxay ku cadaadineysaa hoggaamiyeyaasha adduunka inay oggolaadaan shidaalka joogtada ah ee caalamiga ah ee G7
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Investments • Shirka Warka Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Madaxa shirkadda Heathrow John Holland-Kaye
Kulankii G7 ee lagu qabtay magaalada Cornwall jimcihii oo uu qabtay Royal Highness The Prince of Wales, Maamulaha Heathrow John Holland-Kaye ayaa ku cadaadiyey hogaamiyaasha G7 in ay ku heshiiyaan shirweynahooda war murtiyeedka sii kordhaya ee 10% SAF marka la gaaro 2030, oo koraya ugu yaraan 50 % marka la gaaro 2050, iyo sidoo kale noocyada farsamooyinka dhiirrigelinta qiimaha ee loo adeegsaday in lagu taageero baahida iyo laadadka bilowga qaybaha kale ee kaarboon hooseeya.
SAF waa tikniyoolajiyad la xaqiijiyey, oo loo isticmaalo illaa iyo WWII si loogu duulo dagaalyahannada markii saliidu yaraato, waxayna ka shaqeysaa diyaaradaha jira
SAF waa xal ka shaqeyn kara adduunka oo dhan, laakiin waxay u baahan tahay in si ballaaran kor loogu qaado
G7 wuxuu hogaamin karaa hogaan caalami ah isagoo si wada jir ah ugu helaya waajib ugu yaraan 10% SAF marka la gaaro 2030, kuna sii kordhaya ugu yaraan 50% sanadka 2050
Hogaamiyaasha dhaqaalayaasha aduunka ugu waa weyn ayaa loogu baaqay in ay yareeyaan qiiqa Hawada iyagoo si wada jir ah ugu guntaday waajibaadka isticmaalka shidaalka duulimaadyada waara (SAF). Kulan G7 ah oo lagu qabtay Cornwall jimcihii by Royal Highness The Prince of Wales, Heathrow Maamulaha guud John Holland-Kaye wuxuu ku adkeeyay hogaamiyaasha G7 inay isku raacaan war murtiyeedkooda sii kordhaya ee waajibaadka 10% SAF marka la gaaro sanadka 2030, taasoo ka dhigeysa ugu yaraan 50% sanadka 2050, iyo sidoo kale noocyada qaababka dhiiragelinta qiimaha ee loo adeegsaday taageerada dalab iyo laad bilaabaan qaybaha kale ee kaarboon hooseeya.
Duulistu waa awood wanaag. Waxay ka faa'iideysaneysaa bulshada iyadoo la isku xirayo dadka iyo dhaqamada loona suurtogelinayo ganacsiga waddamada oo dhan. Waa inaan ka saarnaa kaarboonka duulaya si aan ugu ilaalin karno faa'iidooyinkaas aduunyo eber ah. Duulimaadyada waaweyn ee dhammaan gobollada G7 iyo tirada sii kordheysa ee adduunka oo dhan waxay ballanqaadeen inay eber saaraan sannadka 2050. Waxaan ku guuleysan karnaa yoolkan oo keliya inaan si dhakhso leh kor ugu qaadno isticmaalka shidaalka duulimaadyada waara.
SAF waa tikniyoolajiyad la xaqiijiyay, oo loo isticmaalo illaa iyo WWII si loogu duulo dagaalyahannada markii saliidu yaraato, waxayna ka shaqeysaa diyaaradaha jira Waxay horey u shaqeysay 250,000 oo duulimaad oo adduunka ah. SAF waxay noqon kartaa mid shidaal qaata oo horumarsan oo laga sameeyay qashinka beeraha, kaymaha qoysaska iyo warshadaha ama shidaalka macmalka ah ee laga sameeyo kaarboonka laga soo saaray hawada iyo tamarta nadiifka ah, labaduba waxay keenaan keydinta nolosha ee 70% ama ka badan. Toddobaadkan uun, Heathrow waxay heshay marki ugu horreysay ee SAF waxayna ku dartay nidaamkeeda ugu weyn ee shidaalka si loo muujiyo caddeynta fikradda garoonka diyaaradaha.
SAF waa xal ka shaqeyn kara adduunka oo dhan, laakiin waxay u baahan tahay in si ballaaran kor loogu qaado. G7 wuxuu hogaamin karaa hogaan caalami ah isaga oo si wada jir ah ugu xilsaaraya waajibaadka ugu yaraan 10% SAF sanadka 2030, kuna sii kordhaya ugu yaraan 50% marka la gaaro 2050. Iyadoo ay weheliso dhiirigelinta qiimaha saxda ah, oo xasilloon in ka badan 5 - 10 sano (sida Heshiisyada Kaladuwanaanta) kuwaas oo si wax ku ool ah ugu kordhay kor u qaadista tamarta dabaysha badda ee Boqortooyada Midowday), taasi waxay u diri doontaa calaamadda saxda ah ee suuqa si loo furo maalgashiga dhirta SAF. Tani waxay abuuri doontaa shaqooyin cusub warshadaha cagaaran ee G7.
“Waxaan dhamaanteen isku raacsanahay in joojinta isbadalka cimilada ay tahay caqabada ugu weyn ee hortaagan dhulkeena. G7 waxay horey u muujisay hogaamin iyadoo la isku raacsan yahay canshuurta ugu yar ee shirkadaha caalamiga ah, iyo hadii aan kuxiran karno ruuxdaas wadajirka ah si wadajir ah aan ugu ballanqaadno amar ugu yaraan 10% isticmaalka shidaalka duulimaadka waara ee 2030 iyo dhiirigelinta qiimaha saxda ah ee loo adeegsado, waxaan hubin doonaa caruurteena inay heli karaan faa'iidooyinka duulista iyadoon kharashka kaarboonku bixin. Duulista hawadu waa awood wanaag mana sugi karno in qof kale uu xaliyo dhibaatadan waqti uun mustaqbalka - waxaan haysanaa qalab aan maanta ku qaban karno, ruuxda wada jirka ah ayaa hada timid waxaanan ku boorinayaa hogaamiyaasha G7 inay hada qaadaan tilaabo la taaban karo. ”
Heathrow wuxuu safka hore uga jiray u-qareemeynta iyo isbeddelka dhimista qiiqa kaarboonka ee waaxda duulista. Bilowgii sanadka 2020, waaxda duulista hawada ee UK, waxay noqotay waaxda duulimaadka qaran ee ugu horreysa adduunka ee ballanqaadda inay eber saarto sannadka 2050, iyadoo Heathrow ay door muhiim ah ka ciyaareyso. Marka lagu daro dhowaan soo gelinta shixnaddii ugu horreysay ee SAF nidaamka shidaal siinta, dhammaan kaabayaasha garoonka diyaaradaha waxay ku shaqeeyaan 100% koronto la cusboonaysiin karo, iyadoo qorshayaasha socda ay yihiin ka weecashada kuleylka gaaska ee garoonka bartamaha 2030-yadii, oo noqota gebi ahaanba eber kaarbooni ah .
Heathrow waxay sidoo kale soo celisay 95 hektar oo dhul beereedka Boqortooyada Midowday ah oo soo saarayay kaarboonka waxayna hadda bilaabeen inay u dhaqmaan sidii kaarboon biyo dhaqid. Maamulaha Heathrow ee Istaraatiijiyada Kaarboon, Matthew Gorman, ayaa hogaamiyay kooxdeeda abaalmarinta ku guuleysatay kaarboonka iyo joogtaynta tobankii sano ee la soo dhaafay waxayna door muhiim ah ka ciyaartay wadista himilooyinka iyo qorshayaasheena. Waxaa loo aqoonsaday adeegyada Decarbonisation of Duulimaad leh MBE oo ku jira liiska Maamuusta Dhalashada Boqoradda. Heathrow waa meel kafiican tabarucyadiisa. In kasta oo sharafkani u yahay calaamadee muhiim u ah horumarka dhammaan Heathrow uu gaadhay, safarka lagu hubinayo faa'iidooyinka duulimaadka ayaa la sugay mustaqbalka iyada oo aan kharashka kaarboonku yahay mid dheer oo shaqadeenna iyo go'aankeennu sii socdaan.